Sitrana very na voafafa Data avy amin'ny SSD | Data Recovery for SSD
Ahoana no To sitrana very na voafafa Data avy amin'ny SSD
Home → Ahoana no To sitrana very na voafafa Data avy amin'ny SSD
Hita very na voafafa angona avy amin'ny SSD (State mafy Drive) Tsy voatery ho sarotra.
Azo antoka, amin'ny RescuePRO® Deluxe for SSD, ny famerenana dingana dia toy tsotra toy ny dingana tsotra telo.
*aza hadino fa, RescuePRO® Deluxe for SSD dia natao ho an'ny angon-drakitra sitrana avy ivelany SSD aelin'ny, dia tsy natao ho sitrana amin'ny rafitra aelin'ny.
RescuePRO® Deluxe for SSD fanononana tsy ampy amin'ny roa ny Windows® ary ny Mac Malagasy Bible.
Hahazo ny dikan-Windows eto……
Get ny Mac dikan eto….
Ahoana no sitrana voafafa antontan-taratasy avy amin'ny SSD?
Manamarina fa ny SSD fiara ivelany dia mifandray ao amin'ny solosaina.
1. Start RescuePRO® sy mifidy ny karazana fomba fiasa fanarenana tianao hanao – Sitrana ny File Content (Type) na Sitrana ny Filesystem (Undelete).
Sitrana ny File Content no banjino ny fitaovana rehetra sy ny angona sitrana amin'ny alalan'ny rakitra karazana votoaty fankatoavana na dia ny filesystem no tsy ampy.
Sitrana ny Filesystem dia undelete ny asa ary mitaky ny marim-pototra filesystem.
Tsy azo antoka izay karazana famerenana mety mila ho an'ny sitrana?
Aza misalasala hifandray antsika maimaim-poana fanohanana ara-teknika.
Ny mpiasa namana dia afaka mandeha ianao amin'ny alalan'ny fisafidianana ny tsara ny toe-javatra ho an'ny fanarenana.
Raha misafidy ny sitrana amin'ny alalan'ny File Content, manaraka efijery dia hamela anao ny mifidy na Photos, Audio / Video, na hafa Files.
2. Choose your removable media from the list (mampiasa ny toerana misy anao ny safidy RescuePRO voalohany dia nihazakazaka ka mampiasa ny fiara taratasy izay maneho ny haino aman-jery, na mivantana ny fitaovana amin'ny fomba ara-batana, raha tsy misy fiara taratasy efa voatendry ny haino aman-jery).
Select START mba hanomboka ny dingana scanning.
3. Once the scan completes you will receive a list of recovered files. Ny antontan-taratasy dia voavonjy tamin'ny fiara mafy avy hatrany.
Tsindrio Output Folder mba hijery ny antontan-taratasy:
Dia izay! Ny raki-daza dia izao ho azo zahana ao amin'ny lahatahiry output.
Mba hiarovana ny fiara miaraka amin'ny voafafa antontan-taratasy, antontan-taratasy rehetra dia tsy maintsy sitrana ho voavonjy hafa fitehirizana fitaovana na fiara iray hafa ao amin'ny rafi-taratasy. Aza télécharger rindrambaiko ho an'ny fiara izay tianao ho sitrana.
tsarovy, raha toa ka mila ho sitrana rakitra avy amin'ny fiara mafy, Fitaovana FILERECOVERY® ho an'ny fiara mafy sitrana.
Raha toa ka tsy afaka indray sy hahita ny tahirin-kevitra miaraka amin'ny fotoam-pitsarana dikan, Misy toe-javatra hafa mety ho afaka hanampy anao amin'ny. No mahita teknisiana izay afaka manatanteraka ny fahasitranana ara-batana ao amin'ny iray amin'ireo angona fanarenana foibe. Mba hifandray fanarenana ny angona foibe, fotsiny tsindrio eto >>> Data Recovery Centers<<<< Miaraka amin'ny fanarenana ny vokatra, dia manolotra fanohanana ara-teknika malalaka manam-petra. Raha toa ka manana fanontaniana ara-teknika eo amin'ny samy hafa dikan-misy, na izay dikan tsara indrindra ho anao, dia mifandraisa aminay